【 # No.2020Guide 】ကျွမ်းကျင်သူများကိုကူညီပေးခြင်း🥇 1 အတွက်ဒူဘိုင်းတစ်ဦးကယောဘ Get လုပ်နည်း!
ဧပြီလ 19, 2019
သင်ပင်ဖြစ်စေ ရှာဖွေနေ start သို့မဟုတ်သင်ရုံဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောသတင်းရတယ်။ သင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အစျေးကွက်အသစ်ဖြစ်ကြ၏။ သင်ပထမဦးဆုံးအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ hit သငျ့သညျ။ နှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်နေဆဲစော်ဘွားဖြစ်ပါသည်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ ဤအချိန်ကျွန်တော်စော်ဘွား Cabin Crew ပွင့်လင်းနေ့သွားမည်သို့သတင်းအချက်အလက်များကို / အကဲဖြတ် + အင်တာဗျူး (န်ထမ်းခေါ်ယူမှုအကြံပေးချက်များ + မေးခွန်းများကို)
အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေခြင်းကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ငှားရမ်းသူကလူနေ့တိုင်းကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရာပေါင်းများစွာန်းကျင်ဦးတည်ကြောင်းကိုသင်သတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအသေချာများအတွက် အမှန်တကယ်စော်ဘွားကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေ။ ငါသည်သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. အလွန်အကျွံမသိရပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်သင်တန်း၏ CV ကိုစစျဆေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပညာရေးနှင့်သေသောသူတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပိုပြီးထွက်ရှာရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် မင်းဘဝမှာမင်းဘာလုပ်လဲ.
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသေချာသငျသညျကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာကြလိမ့်မည်ပါစေ။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကြောင့်, အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကျနော်တို့ကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် သငျသညျဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်ရဖို့။ ကျနော်တို့အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအကြံပေးချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးနေကြသည်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလားအလာအလုပ်ရှင်များများအတွက်လျှောက်လွှာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လို ပင်တစ်ခါတစ်ရံပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်း။
ကိုယ့်ကိုသင်လိမ့်မည်သေချာစေရန် အကောင်းနဲ့ပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များ။ ကျနော်တို့နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာစော်ဘွားရန်သင့် application စေရန်မည်သို့သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးနေကြသည်။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ, သင်သည်သူတို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေး site ပေါ်တွင်စော်ဘွား Cabin Crew အွန်လိုင်းယောဘသည်လျှောက်လွှာဖြည့်ရန်မည်သို့၏ဥပမာတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် (link ကိုဖြစ်ပါသည် - http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
ဒီ application ဖြစ်စဉ်ကိုသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့် application စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌နီးပါးအစက်မရှိသောကြောင်း 100% သေချာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ YouTube ကိုရုပ်ရှင်ပေါ်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ဒီအကောင်လေးကိုဖန်ဆင်းထားသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများအတွက် သူစော်ဘွားကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရန်မည်သို့မသိရပါဘူး။ အချို့လူတွေဟာတကယ်ကသူတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့တခြားလူတွေကိုကူညီခြင်းနှင့်ပေးအပ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင့်လျော်သောလမ်းအတွက်ကြောင့်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်။ ထိုသင်အတွက်စုဆောင်းမှုကိုယ်စားလှယ်များများ၏ရှေ့မှောက်၌သင်၏လျှောက်လွှာအရခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ။
ပထမဦးစွာတစ်ဦးကောင်း CV ကို Make
တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသော CV ကို, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ?
သင်ကွဲပြားခြားနားသောရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားလျှင်ပင်တစ်ခုတူညီ CV ကိုပေးပို့သလား? ကြော်ငြာနိုင်ပါတယ်တုံ့ပြန် "လက်ကား" သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချ။ အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်များများခင်းကျင်းပြသ၏ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါသည် အလားအလာအလုပ်ရှင်ဖို့အရေးအပါဆုံး။
အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်အရေးကြီးဆုံးစာရွက်စာတမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ စော်ဘွားခုနှစ်တွင်စတင်မှာ, ဒီတစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည် သင့်အသက်ကိုကယ်စေခြင်းငှါ။ ကောင်းပြီ, ကျွမ်းကျင်သူများယေဘုယျအားဖြင့်အဖုံးအက္ခရာများပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်ဖို့အာရုံစိုက်ပါဘူးစကားပြော။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းတစ်ဦးကယောဘကိုရယူပါဖို့ဘယ်လိုအဘို့အအားမရလမ်းညွှန် 2020 အတွက် ?.
ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရန်သင့်တုန့်ပြန်စေခြင်းငှါ ကတိကဝတ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏သက်သေအထောက်အထားများ။ ဒါဟာသင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းသက်သေပြအရေးကြီးပါသည်။ ယင်းကြော်ငြာများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်း သင်လျော်သောပြင်ဆင်မှုရှိပါကသင်ဆုံးဖြတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများ သင်အလုပ်ရှင်ကကမ်းလှမ်းအခြေအနေများနှင့်အတူကျေနပ်မှုရှိပါသလဲလျှင်။
သင်ကယူအေအီးအတွက်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေကြသူကျွမ်းကျင်သူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ သင်ညာဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စဉ်းစားဟန်လမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုလက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြောင်းထင်လျှင်။
သင်ကြော်ငြာဖြေဆိုမီ, သငျသညျတိကျတဲ့ရပ်တည်ချက်ယူပိုင်ခွင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ရှိမရှိစဉ်းစားပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်နေတာအခါ, သငျသညျကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်တန်ဖိုးရှိကြောင်းနိဂုံးမှမဝင်စေခြင်းငှါတစ်ဦးလက်ထောက်အဖြစ်ဥပမာ။
အမြဲတမ်းသင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအလုပ်ကြော်ငြာလျှောက်ထားကြသည်သေချာပါစေ။ ဥပမာ, အလုပ်ရှင်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာရန်သင့် CV ကိုပေးပို့ခြင်း သူကိုသွားဆရာဝန်အထူးကုနှင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုရှာစေခြင်းငှါစျေးကွက်၌တည်ရှိ၏မည်သည့်အချက်မှာမှာအားလုံးသင်ကူညီကြဘူး။
ရာထူးဖို့တာဝန်အလုပ်များကိုအတိုင်းအတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်, သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ် verify နိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းကိုနှင့်အတူထိရောက်စွာသင့်ရဲ့တာဝန်လုပ်ဆောင်။ ယခင်ကုမ္ပဏီများမှအတွက်ယူလုပ်ရပ်များကြေညာချက်ထွက် set လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်လျှင်, သင်ရှိသည် သင့်ရဲ့အလုပ်သစ်ဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အလမ်း။ ဒါဟာသင်လိုအပ်သောအသိပညာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သင်သည်သင်၏ CV ကိုအတွက်ပြသသောအရေးပါသည်။
အလားတူအနေအထားက x-တစ်နှစ်အတွေ့အကြုံ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး။ ဒါဟာအလုပ်ရှင်များအနေနဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှော်လင့်ထားကြဘူးကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤအခြေအနေမှာ, ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ဖော်ပြချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရကျိုးနပ်သည်။ အများစုကတော့သို့သော်အလေ့အကျင့်အလွန်အရေးပါသည်။
သင်ယခင်ကသင်လက်ရှိလျှောက်ထားကြသည်အရာကိုအလားတူရာထူးကျင်းပပြီသရုပ်ပြ, သင့်အလုပ်အကိုင်သမိုင်းအလုပ်ခေါင်းစဉ်, အလုပ်အကိုင်အကာလများနှင့်တာဝန်များပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြရန်။ ဤအ contents တွေကိုတိုက်ဆိုင်အရေးကြီးသည်က အဆိုပါတာဝန်များကိုအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုညွှန်ပြအတူ။
ပညာရေး ... / ခွင့်ပြုချက် ...
တစ်ဦးကသူနာပြုတစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဆရာ - ဤအစညျးမဉျြးစညျးကမျးဝန်ခံဥပမာ, သငျသညျအခွင့်အရေးရှိပါကသာကျင့်သုံးနိုင်သူတွေကိုဆိုလိုသည်မှာ။ ဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော PR စနစ်ဝန်ထမ်း, ကုန်သည်သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်မာကဲ့သို့သောအခြားယောင်ဆောင်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလုပ်ရှင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းကနေအထူးသဖြင့်ပညာရေးကိုမျှော်လင့်ရန်.
ဒါဟာသင်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီလေ့လာမှုအဘယ်အရာကိုသင်တန်းမသာအရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအစလေ့ကျင့်ရေး၏သင်တန်းများနှင့်အပိုင်းပိုင်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည် သငျသညျရရှိခဲ့နှင့်အလုပ်မှာလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးသောကာလအတွင်း။ ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်အဖြစ်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကို Adobe Photoshop ကို, InDesign သို့မဟုတ် Corel Draw အဖြစ် program ကိုကိုင်တွယ်သင်တန်းများအကြောင်းကိုဥပမာ, ကိုရေးနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာများ၏ post ကိုလျှောက်ထားသည့်အခါ dietetics, etc ၏လယ်ပြင်တွင်ဘွဲ့လွန်လေ့လာမှုများအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
လက်မှတ်များကိုသီးခြားဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွမ်းကျင်မှုများကိုသုံးနိုင်တယ်။ လူကြီးမင်း၏ CV ကိုတွဲအဆိုပါအစုစု သင့်ရဲ့အရည်အချင်းကိုအတည်ပြုဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်။
ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် သငျသညျတိုး၏အဆင့်ကိုသတ်မှတ် - ဤဘာသာစကားကိုအရည်အချင်းမှဒါပေမယ့်လည်းကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ၏အသိပညာဖို့မသာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု၏အတည်ပြုချက်ကိုရယူမှထိုသို့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာမေးပွဲဖြတ်သန်းကျိုးနပ်သည်။ ပြင်ဆင်မှုတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်, သင်ဥပမာ, စာမေးပွဲဖြေဆိုမဟာဗျူဟာကိုသင်လေ့လာသင်ယူမည်သည့်ကာလအတွင်းသင်တန်းတက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အချက်အလက်တွေလို, အချိန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း ... - အဲဒါကြောင့်စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးထိုက်သည်အပျော့ကျွမ်းကျင်မှု, လူကြီးမင်း၏ CV ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်အဖြစ်, စုဆောင်းရေးသငျသညျ, ဥပမာ, စည်းရုံးဖြစ်ကြောင်းထွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းကို၏အတည်ပြုချက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ညီလာခံ၏အဖှဲ့အစညျးသို့မဟုတျပေါင်းစပ်ပြီး အလုပ်နှင့်လေ့လာမှုများ။ ဒါဟာသင်ရှိသည်ပျော့ကျွမ်းကျင်မှုအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့အစည်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းမြားခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်။
တစ် CV ကိုဖန်တီးသောအခါ, က optional ကို, အပိုဆောင်းရည်ညွှန်းရကျိုးနပ်သည် အလုပ်ရှင်တို့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လိုအပ်ချက်များကို။ ဒါဟာသင်အလုပ်လုပ်ဝန်ခံလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်နိုင်သောအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျမြင်ရပါလိမ့်မည်ဆိုပါက - ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုနေရာလွတ်ပူဇော် ...
သင်ကြေညာချက်၏နောက်ဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖတ်ပြီးသောအခါ, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများ အလုပ်ရှင်အကူအညီနဲ့ကကမ်းလှမ်းအခြေအနေသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်လျှင်။ သငျသညျဟုတ်တယ်ထင်ပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။
တစ်ဦးကစင် CV ကိုအင်တာဗျူးနှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျ အကျိုးဆက်သင်သည်အလုပ်ဝန်ခံပါလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုမှကူညီသည်။ ကြော်ငြာမှတုန့်ပြန်စေလွှတ်တော်မူ CVs အရေအတွက်ခိုင်လုံသောမျှမက, အဘယ်အရာကိုအများဆုံးအရေးပါသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေမှုများမှာ ပိုပြီးထိရောက်၏ CV ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်လျှင်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ပွင့်လင်း - တစာရွက်စာတမ်းဖန်တီးသောအခါကအကြောင်းအရာဒါပေမယ့်လည်းပုံစံမသာပြုစုစောင့်ရှောက်တာကျိုးနပ်သည်။ သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရွက်စာတမ်းဖန်တီးပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက CV ကိုဖန်တီးသူသုံးပြီး.
အဘယျသို့ CV ကို 2020 အောင်မြင်မှုသေချာ?
သေးအခိုင်အမာကို Creative နှင့်။ ခေတ်မီပေမယ့်အစဉ်အလာပုံစံနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ မူလက, ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းအတူ။ အံ့သြစရာမဟုတ် embarrassingly ။ မှန်မှန်ကန်ကန်, သောငြီးငွေ့စရာဟုမဆိုလိုပါ။ ကျနော်တို့ရှာဖွေစုဆောင်း၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့သစ်ကိုနှစျတှငျ CV ကို refresh ဖို့သင်မည်သို့အကြံပြုသည်။
သငျသညျ applications များနေ့စဉ်နေ့တိုင်း, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ပို့ပေးပါ ?. သငျသညျထိုပြဿနာသည်အဘယ်အရာမသိကြသလော ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏ CV ကိုမှာပိုပြီးဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်, သင်ကောင်းစွာမှန်ကန်သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဖတ်ရှုသို့မဟုတ်သိရန်တစ်စုံတစ်ဦးကပေးထွက်ရှိသောလျှင်။ HR အထူးကုအဆိုအရဒီအလေ့အကျင့်သည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများဘာသာစကား, stylist, စာလုံးပေါင်းနှင့် typing error တစ်ခုအမှားများကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ်။
ဟုပြော - အထူးသဖြင့်, ထို Y ကိုမျိုးဆက်ယခုဖန်တီးမှုကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်အလေးပေး, ဒါပေမယ့်မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မေ့လျော့ခြင်းနှင့်အခြေခံသဒ္ဒါအမှားတွေအောင် John Smith, ဒူဘိုင်းစီးတီး Company ၏ CEO ဖြစ်သူ
တစ်ခုကြော်ငြာလက်ကမ်းကြော်ငြာ, ရုပ်ပြစာအုပ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယို၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးက CV ကို။ မာတိကာ icons များ, နိမိတ်လက္ခဏာများ, ရုပ်ပုံများအားဖွငျ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ infographic အပေါ်အလေးပေး။ ထိုသို့သောဖက်ရှင်ယခုပလီကေးရှင်းသည်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ပို. ပို. လူစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ထက်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်မိမိတို့၏ CV ကိုဆက်ဆံပါ။
ထိုသို့သောတီထွင်ဖန်တီးမှုအလွန်ကြိုဆို, သို့သော်အဆင်တန်ဆာမှတပါးနှင့်စတိုင်ဆုံးရှုံးကြောင်းအခွအေနေပျေါတှငျလညျးအရေးကွီးသတင်းအချက်အလက်ရှိရလိမ့်မည်။ တစ်ထမ်းရှာဖွေသူများအတွက်င့်လင်းမြင်သာအကြောင်းကိုအရေးကြီးသော, တိကျသောဒေတာဖြစ်ပါတယ် ဘယ်မှာအခါတစ်စုံတစ်ဦးကအလုပ်လုပ်ခဲ့သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအဘယျအတာဝန်များကိုသူရှိခဲ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အတွေ့အကြုံကိုသူကရရှိခဲ့ဖူး။
အဆိုပါ CV ကိုအတိုကောက်ဖို့စိတ်သဘောထားသေချာပေါက်အကျိုးရှိရလဒ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပါဘူး - ယောဟန်ကရှင်းပြသည်။ သူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုနှစ်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး ရိုးရာပုံစံကိုတစ် CV ကိုပြင်ဆင်တဲ့ရုပ်ပြအဖြစ်ဥပမာသင့်ရဲ့စီမံကိန်းတွေလုပ်ဖို့ link တစ်ခု, သင်စာရွက်စာတမ်းများ၏ဂရပ်ဖစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတွေ့မြင်နိုင်သည်ဘယ်မှာအစုစုသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်, ပါဝင်သည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
HR အထူးကုလည်း Over-အားသွင်းနည်းပညာဝတ္တုတွေနဲ့ sensitize ။ - တိုင်းထမ်းခေါ်ယူမှု, ဥပမာအားဖြင့်, QR codes တွေကိုနှင့်ဖတ်ရှုခြင်း CVs ခွင့်ပြုကြောင်းမိုဘိုင်း application များကိုသုံးနိုင်သည်မဟုတ်။ တစ်ခုထို့အပြင်အဖြစ်ဆက်ဆံဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, စံဖြေရှင်းချက်ထက်ပိုတစ်ခုခု - ယောစမစ်အလေးပေးဖော်ပြသည်။
သင်ဘယ်လိုလူအစုအဝေးထဲကနေထွက်ရပ်နိုင် ?. infographics မှတပါးအဘယ်အရာကို, ယခုထိပ်ပေါ်မှာလဲ?
ကိုယ်ပိုင် website ကို - ကျွန်တော်တစ်ဦးရိုးရာ CV ကိုထက်ကအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များထားသင့်ရဲ့ကိလေသာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
(ထိုကဲ့သို့သောကို My အလုပ်အကောင့်ကဲ့သို့) စုဆောင်းမှုတွင်ကျယ်စွာအပေါ်အကောင့်အသစ်များ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ အလားအလာအကြီးအကဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်သော web ပေါ်မှာသူတို့အားသောနေရာများ။ ဒါဟာနှစ်သစ်နှင့်အတူဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများကို update ကျိုးနပ်သည်။
ဗီဒီယို၏ပုံစံအတွက် CV ကို - ဒီကသင်၏အိပ်မက်ကုမ္ပဏီတင်ဆက်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, လျှောက်လွှာ၏ဤပုံစံကိုကိုယ်အတင်းပါဘူး - ကျွန်တော်ကင်မရာများ၏ရှေ့မှောက်၌ကြောက်စိတ်ခံစားရလျှင်မူကား, ငါတို့ diction နှင့်ကျွမ်းကျင်စွာ, လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်။
social media - နေကြတယ် headhunters နေဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုကပညာရှင်ပီသစွာ run ပရိုဖိုင်းကိုစောင့်ရှောက်တာကိုရကျိုးနပ်သည်ဒါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းလူမှုမီဒီယာကိုသာ အလုပ်ရှာနေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပုံပြင်များ၏အချို့ကိုလည်း Facebook မှတွင်ကျယ်စွာအပေါ်တင်ပြနေကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်စီမံကိန်းများကိုဖော်ပြ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုဝေမျှ - ငါတို့သည်စုဆောင်းရေးရဲ့မျက်စိဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အင်အားသုံးခြင်းဖြင့်ဘာမျှမ
အဆိုပါ HR ရဲ့ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်စျေး၏များ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်တီးမှု, ပုံမှန်မဟုတ်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုပြသ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်။ သူတို့ကကွန်ပျူတာဂိမ်းသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်၏ပုံစံအတွက်ဥပမာ, သူ့ CV ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်သူကား, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း application ကိုပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးအထူးကု, ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကြော်ငြာအထူးကုအဖြစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်လိုအပ်ရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပင်အဆိုပါ infographic အလိုတော် အခြားမည်သည့်ဖန်တီးမှုလယ်ပြင်၌အလုပ်.
သို့သျောလညျးဆိုပါကကျွန်တော်တစ်ဦးဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်လုံလောက်ခိုင်မာတဲ့ခံစားရတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပြစာအုပ်ဆွဲမရကြဘူး - ရဲ့့သွားပါစေရဲ့ကိုယ့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်သို့မလိုက်ကြကုန်အံ့ဟုဆို။ - တခါတလေကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတစ်ဦး template ကိုတစ်ဦးပုံတူရုံတစ်ခုအရည်အချင်းမရှိတဲ့မိတ္တူဖြစ်ပါတယ်။ ညံ့ဖျင်းသောလက်ရာသာကျဆင်း အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်း - ယောဟန် Smith ကဤသို့ဆိုသည်။
အရူးသို့သော်စစ်မှန်သော - တစ် CV ကိုအစားလက်ကမ်းစာစောင်များ!
လက်ကမ်းစာစောင်များထွက်လိုက်တာနဲ့တစ်ဦးရံဖန်ရံခါအလုပ်ဖြစ်ရန်ရှိသည်ပါဘူး! ဒါဟာတစ်လမ်းနိုင်ပါတယ် ဥရောပတိုက်တွင်အလုပ်ရှာတွေ့။ ဒါဟာ Dawid Dąbrowski Warsaw ကိုရုံးအဆောက်အဦးများအောက်၌အလုပျအတှကျတစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဲ့သို့မိမိကိုမိမိတင်ပြလက်ကမ်းစာစောင်များကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်သူတစ်ဦးပိုလန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကသက်သေပြခဲ့သည်။
စိတ်ကူးထွက်လှည့်လျှင် Pracuj.pl သည်ဒါဝိဒ်ကမေးတယ် ထိခိုက်စေခြင်းငှါမိမိအိပ်မက်အလုပ်ရှာတွေ့ခဲ့ကြ.
အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကို Creative နည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ အချို့လူတို့သည်မိမိတို့သဏ္ဍာန်နှင့်အတူလမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဆွဲထားသို့မဟုတ် Facebook ပေါ်တွင် fanpages ဖန်တီးသောအခါ, ဒါဝိဒ် Flyer ... ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်! ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့?
သင်ပေါင်း non-စံလမ်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေ ...
Dawid Dąbrowski: ကလုံးဝ Non-စံရဲ့အလျှင်ငါမသိရပါဘူး။ အသုံးပြုရန်အဘယ်သူသည်တကယ်တော့လူပေမယ့်ငါအသုံးပြုသောနည်းလမ်းကျယ်ပြန့်လူသိများသောအထင်အမြင်ရှိ အလုပ်ရှာမကြာခဏမြင်ကြကြသည်မဟုတ်.
ဒါဝိဒ်သည်။ ကိုယ့်လက်ကမ်းစာစောင်များ (ပြုံးရယ်) ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မရင့်ဆိုလက်ကမ်းစာစောင်များ။ ငါဒါ့အပြင်ငါလက်ကမ်းကြော်ငြာထဲကတစ်ခုဘက်မှာအကြှနျုပျနှငျ့အ QR ကုဒ်ကိုမှအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို ထား. , ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံတွေမှာသူတို့ကိုပြသခဲ့သည် ငါ၏အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်းကိုမှပြန်ညွှန်း, နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်မှာမာလ်တီမီဒီယာကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ, ငါရှိသောကြောင့် 8 နှင့်9အကြား, မင့်ဆိုဝေးပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်: ဝါဆောတွင်အကြီးဆုံးရုံးအဆောက်အဦးမှတံခါးဝမှာနံနက်ယံ၌ 30, သူတို့နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာအပြုံးနှင့်အတူအိပ်ချင်န်ထမ်း။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာ, အလက်ကမ်းကြော်ငြာကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ကိုလည်းပြုံးပြသည်။
ဒါဝိဒ်သည်။ ဒီလိုအမှုတို့ကိုပြုလို! ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေခဲ့သည်။ ငါသဘောတရားထင်, ငါသည်ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြောင်းကိုပြသချင်ခဲ့တယ်ဤ action နဲ့အတူ, ငါ့စိတ်ကူးများတိကျတဲ့ပန်းတိုင်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စိတ်ခံစားမှုထုတ်လုပ်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ ပုံစံကြောင်းသက်သေပြလို့ယူဆတယ်ခဲ့သည် ငါတိုင်းကုမ္ပဏီ၏အိပ်မက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းကို။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရေးမယူကဲ့သို့သောအလုပ်ရှာနေနှင့်စီးဆင်းမအီးမေးလ်များကိုစောင့်ဆိုင်းအတွက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ လေးမြို့ရိုးမှထွက်ရဖန်တီးမှုတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်။ ဒါဟာအကြီးအတှေ့အကွုံမြားခဲ့သည်။
ဒါဝိဒ်သည်။ အဆိုပါလက်ကမ်းစာစောင်များဓာတ်ပုံများတစ်ဦးလျှော့စျေးပြီးနောက်ငါ၏အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဓာတ်ပုံဆရာတို့ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်, ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်းကိုဖန်ဆင်းနဲ့ကျွန်မကိုလည်းမာလ်တီမီဒီယာ CV ကိုပြုလေ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါပေမယ့်ပုံနှိပ်ပြီးသားပုံနှိပ်အိမ်သူအိမ်သားများကတာဝန်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာ PLN 1,200 မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခဲ့ပေမယ့်လည်း, ကုန်ကျစရိတ်, အထူးသဖြင့်မြင့်မားတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါ၏ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးတည်းလက်ကမ်းစာစောင်များပြင်ဆင်နေကြောင်းများကိုမငြင်းဆိုနိုင် နေ့စဉ်အလုပ်နီးပါးသုံးပတ်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ဖြုန်းရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဝိဒ်သည်။ ရလဒ်စိတ်ကူးရှိကြ၏။ အပြင်အများအားဖြင့်အလွန်အပြုသဘောဆောင်သောလက်ကမ်းစာစောင်များရဲ့လက်ခံသူများကနေတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ချက်မှငါစိတ်ကူးများအတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်အတူ e-mail တွေအများကြီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့သည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာနေလျှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကများသောအားဖြင့်ကောင်းစွာခံစားမိပါဘူး။
အဲဒီလိုအပ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရှိသောကြောင့်ရက်အနည်းငယ်ကင်ပိန်းငါ၏အစအဦးပြီးနောက်, ငါတစ်ပါတ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းငါးရာကွာပေးရစီမံခန့်ခွဲ, ပြီးတော့ငါမဆိုပိုပြီးဝေးမပေးခဲ့ပါဘူး, 1000 လက်ကမ်းစာစောင်များစုစုပေါင်းလုပ် အင်တာဗျူးအဘို့ကိုဖိတ်ကြားခံရဖို့စတင်ခဲ့။ သူတို့ထဲကတစ်ဒါဇင်စုစုပေါင်း, ပိုလန်တွင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီထိုသူအချို့ရှိခဲ့သည်။
ဒါဝိဒ်သည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် ကျွန်မအလုပ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီမှကျေးဇူးတင်စကား (ပြုံးရယ်) ကိုတွေ့။ ငါတော်တော်များများအလုပ်ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်းလက်ကမ်းစာစောင်များကိုကျေးဇူးတင်ကမ်းလှမ်းသောကြောင့်ငါသည်ငါ့လက်ရှိအလုပ်ရှင်နှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာတော်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ငါသည်ငါ့လက်ရှိကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်စေတှနျ့ဆုတျမပြုခဲ့သောသူမူကားခဲ့သညျ။
ဒါဝိဒ်သည်။ ငါသည်ဤလိုအပ်ချက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အရာအားလုံးပြုလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ငါလျှင်, ငါသည် ပို. ပင်အံ့မခန်းတစ်ခုခုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်အခြားသောသူတို့အားမပွုကွောငျးကိုအမှုတို့ကိုပြုလို!
ဒါဝိဒ်သည်။ ငါရှိခဲ့ပါလျှင် တစ်ခုခုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကိုမကျင့်ဘာလုပ်, သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်နှင့်သင်တစ်ခုခုသို့အားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု, အခွက်တဆယ်နှင့်အချိန်ထားလျှင်ပင်အရိုးရှင်းဆုံးကြောင်း တဦးတည်းကိုသင်တွေအများကြီးလုပျနိုငျ.
ကခကျခဲတဲ့အလုပ်ကိုရှာဖွေစေ 8 အမှုအရာ
အတားအဆီး အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့ရန်မလုံလောက်သောသို့မဟုတ်မလုံလောက်အရည်အချင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကအများကြီးသင့်ရဲ့သဘောထားကိုအပေါ်လည်းမူတည်ပါသည်။ ရှာဖွေစုဆောင်းထံမှမက်ဆေ့ခ်ျ၏မရှိခြင်း non-စိတ်ကြိုက် CV ကိုပေးပို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မဟုတ်ပါလျှင်လည်းစဉ်းစားပါ။
1 ။ အလုပ်ရှာဖွေမှတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ကတိကဝတ်
အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေတာအတွက်ပြဿနာများလည်းအနည်းငယ်သာပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဥပမာ, irregularly ၏ CV ကိုပေးပို့ခြင်း။ ဒါဟာအပေါ်ဥပမာ, စနစ်တကျအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုစစျဆေးဖို့ကအရေးကြီးတယ် Bayt.com ပေါ်တယ် - မိုဘိုင်း application ကိုသုံးပြီးသင်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးကြော်ငြာတွေ browse ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ် CV ကိုပေးပို့ခြင်းမပြုမီ, အလုပ်ရှင်ရဲ့တောငျးဆိုခကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကတိကျသောကမ်းလှမ်းမှုကိုကိုက်ညီကြောင်းဒါကြောင့်လူကြီးမင်း၏ CV ကို personalize ရန်သေချာစေပါ။ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းအရှိဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်မလုံလောကျရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ် - သင်ကစိတ်ဝင်စားနေကြသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအရည်အသွေးဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
2 ။ အဆိုပါ CV ကိုအတွက်အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားများ
တစ်ဦးကအလားအလာအလုပ်ရှင် သင်၏ CV အတွက်အမှားအယွင်းများကိုချွတ်တွှေနိုင်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ခြင်းမပြုမီတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။ အဘယ်သူမျှမစာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှု, စာလုံးပေါင်းသို့မဟုတ် stylist အမှားအယွင်းများရှိပါတယ်သတိပြုပါ။
3 ။ အဆိုပါ CV ကိုမလိုအပ်ပါကဒေတာ
အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေတာအတွက်အခက်အခဲသည်လည်းသင်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် e-mail လိပ်စာဟာ CV ကိုတွင်ထည့်သွင်းရပါမည်။ အကယ်. သင်က အဲဒီအကြောင်းမေ့လျော့စုဆောင်းရေးသင့်လျှောက်လွှာတုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
4 ။ စာရွက်စာတမ်း၏မှားနေသောလက်ခံရရှိသူလိပ်စာ
ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ သင်၏ CV, အစဉ်မပြတ်သင်မှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှားအက္ခရာများ - - ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်သင့် application မှမတုံ့ပြန်ပါကအားလုံးကိုမှာညာဘက်စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပေ။
5 ။ လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမလုံလောကျကျွမ်းကျင်မှု
အတားအဆီး အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့လည်းတရားဝင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီဂျာမန်၏အသိပညာလိုအပ်ပြီးသင်သာအင်္ဂလိပ်ကြေညာခဲ့လျှင်, သင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပယ်ချခံရနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့မီ, သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အလုပ်ရှင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသေချာပါစေ။
6 ။ အတှေ့အကွုံ / လွန်းမြင့်မားသောအရည်အချင်းများမရှိခြင်း
အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေတာအတွက်အခက်အခဲများပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်လွန်းမြင့်မားသောအရည်အချင်းများတစ်မရှိခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်စေမည်။ စုဆောင်းရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါ အတှေ့အကွုံ3နှစ်ပေါင်းနိမ့်ဆုံးနှင့်အတူသူဖြစ်ကောင်းပဲမိမိလေ့လာမှုများပြီးဆုံးခဲ့သူတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အကျွံအတွေ့အကြုံကိုတစ်အတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အရည်အချင်းများသူသို့မဟုတ်သူမ၏လိုအပ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းသိရှိသူတစ်ဦးအလုပ်ရှင်သင်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်နုတ်ထွက်လိမ့်မည်ဟုကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည် သာ. ကြီးသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ.
7 ။ အင်တာဗျူးစဉ်ကမလျော်ကန်သောအပြုအမူ
ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့ - သင်၏ CV သူကအင်တာဗျူးအဘို့အသငျသညျကိုဖိတ်ကြားကြောင်းစိတ်ဝင်စားစုဆောင်းရေးအလုံအလောက်။ ယင်း၏ရလဒ်သင့်ရဲ့သဘောထားကိုပေါ်တွင်အဓိကမူတည် - သင်ကဆိုးသည်မှန်လျှင်, သငျသညျအလုပ်အကိုင်အသင်တို့၏အခွင့်အလမ်းကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်မှန်, ကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှုကို၏ဗဟုသုတနှင့်တိကျသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များအရေးကြီးလှသည်။
သင်တို့သည်လည်းတာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ထိုသို့ပြုမှကိုပြင်ဆင်ရမည်။ သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်း, သင်အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုမခံမထားဘူးဆိုရင်, ကောက်ချက်ဆွဲ - ကသင့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ထမ်းရှာဖွေသူမေးရန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီတစ်ခါလည်းပေးထားသောအနေအထားလျှောက်ထားအခြားသူတစ်ဦးကကုမ္ပဏီရဲ့စည်းရုံးရေးယဉ်ကျေးမှုမှပိုကောင်းတဲ့မထိုက်မတန်ပြသခဲ့သည်။
8 ။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်ခြင်း၏မရှိခြင်း
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကစုဆောင်းရေးစိတ်ဝင်စားကြလျှင်, ဒါကြောင့်သင်အနေအထားကိုယူမယ့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုလိုတယ်။ သင့်ရဲ့မသေချာမရေရာ, စီမံကိန်းများ Self-ယုံကြည်မှုကြောက်မရှိခြင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံသငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့သင့်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်စေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတိုးမြှင့်ဖို့, သင့်အရည်အချင်းနှင့်အရည်အချင်းများကိုစဉ်းစား - ကြောင့်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါသည် သင်သည်သင်၏အိပ်မက်အလုပ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
succinctly ငါ့ကိုနှင့်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအကျဉ်းချုပ်, ဒါပေမယ့် succinctly ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ CV ကိုသင်၏ယခင်အောင်မြင်မှု၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာအကောင့်သို့များ၏ဖော်ပြချက်ယူရမယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ သုံးဝေါဟာရများကိုသော့ချက်နေသောခေါင်းစဉ်: အထူးသ, succinctly နှင့်ဘာသာရပ်အပေါ်။
တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း CV ကို၏အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်
CV ကိုသင့်ရဲ့ဟန်ပြဖြစ်ပါသည်။ ထိရောက်သော, စာလုံးပေါင်းနှင့် stylist - ဒါဟာပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှကျစ်လစ်သိပ်သည်းအဖြစ်, ဒါပေမယ့်လည်းအမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုမှအခမဲ့မသာဖြစ်သင့်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်ထားသင့်ကြောင်းအဆိုပါအရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထည့်ပြီးပါပြီ။
ဖုန်းနံပါတ်နှင့် e-mail လိပ်စာ: အဆိုပါ CV ကိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသောအဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အဖြစ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အား enable လိမ့်မည်ဟုအသေးစိတ်ပါဝင်ရပါမည်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ် e-mail လိပ်စာသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အဆိုပါ CV ကိုယခင်ကသိမ်းပိုက်ရာထူးများစာရင်းကိုဆံ့သင့်ပါတယ် - စက်မှုလုပ်ငန်း၏အသိပညာသက်သေပြကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အား။ ဒါဟာတာဝန်များကို၏အတိုင်းအတာဖော်ပြ, ခေတ္တမျှသူတို့အားဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ သိမ်းပိုက်ရာထူးပြောင်းပြန်အချိန်နဲ့တပြေးညီနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြရပါမည် - ပြုမိသည်လွန်ခဲ့သောအလုပ်နှင့်အတူစတင်။
အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏ဤအပိုငျးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားများနှင့်အထူးကုအရည်အချင်းများ၏အခြားအသိပညာများတို့တွင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆံ့သငျ့သညျ။ အထူးသဖြင့်သူတို့အား - ဒါဟာအစပျော့ကျွမ်းကျင်မှုဖော်ပြရကျိုးနပ်သည် တစ်အလားအလာအလုပ်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျအပိုဆောင်းသင်တန်းများနှင့်သင်တန်းများအတွက်ပါဝင်ခဲ့ပါလျှင် - သင့် CV ကိုအတွက်ကအကြောင်းရေးပါ။ သူတို့အားလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက် သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ရာထူးအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်.
သင်တစ်ဦး CV ကိုဖန်တီးဖြစ်စဉ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်စာကြောင်းကိုရေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဘို့သင့်အစီအစဉ်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲတင်ပြ, သင်တို့အဘို့ရည်မှန်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရန်။ ဤကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်သည်ထိုသင်အလားအလာအလုပ်ရှင်ပြပါလိမ့်မယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်နှင့်သင်အနာဂတ်၌အောင်မြင်ရန်လိုချင်တာတွေကိုသိရ.
အရေးကြီးအုပ်ချုပ်မှုကို - Update ကိုဒေတာ
အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရဲ့ CV ကိုတစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံပေါ်မှာ updated ရပါမည်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမှအဆင်ပြေအောင်ရပါမည်, အလားအလာအလုပ်ရှင်အားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအလေးပေးသော။
အဘယ်သူမျှမမှားယွင်းသောအချက်အလက်များကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ သငျသညျမကြှမျးကငျြမှုစာရင်းပြုမထားပါနဲ့။ အရည်အချင်းအားဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်အခါတစ်ဦးကမုသားအလင်းမှလာကြလိမ့်မည် သငျသညျမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပါလိမ့်မည်.
အထောကျအကူ tool ကို - အွန်လိုင်း CV ကိုဖန်တီးသူ
တစ်ဦးက CV ကိုဖန်တီးသူသင်တစ်ဦးပြည့်စုံ, ဖတ်လို့ရအောင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပွငျဆငျကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဲဒါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်စာရွက်စာတမ်းအတွက်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်အားမရအကြောင်းကိုမေ့လျော့မည်မဟုတ်။ သင်တို့သည်လည်း၎င်း၏အမြင်အခြမ်းကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးမင်း၏ CV ကိုသင့်ရဲ့ pass တကြောင်းကိုသတိရပါ သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ရှာတွေ့.
ထွက်မတ်တပ်ရပ်ကာမူရင်း CV ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်အလုပ်ရှင်မှပေးအဆိုပါအတ္ထုပ္ပတ္တိသင့်အကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်။ သင်ကအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ခြင်းရှိမရှိကနေဖတ်နိုင်သငျသညျတိကျသောနှင့် ... ဖန်တီးမှုတွေဟာရှိမရှိ။
တစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာတစ်ဦးသမားရိုးကျမဟုတ်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကလေးထိန်း, ထမင်းချက်သို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်သမား၏ရာထူး, အခြားသူများအကြား, လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်လိမ္မာပါးနပ်တငျပွနိုငျပုံကိုစစ်ဆေးပါ။
မူရင်းနှင့်ကောင်းတဲ့-ရှာဖွေနေ CV ကို, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ?
infographics, ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်၏ပုံစံအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း - အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထူးခြားသောအတ္ထုပ္ပတ္တိကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအထိခိုက်မခံဖြစ်နှင့်ရှိမရှိစဉ်းစားသင့် ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုတကယ်သင့်လျော်တဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ.
မရတိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးသမားရိုးကျမဟုတ်သော CV ကိုများအတွက်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာပုံစံထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ဥပမာအားရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်နည်းနည်းကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်သည့်အတွက်အမည်ခံ:
စျေးကွက် CV ကို
အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကု client ကိုကျက်သရေနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ သငျသညျရောင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အလုပ်ရှင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုကလစ်၏ပုံစံအတွက်တစ် CV ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်နာ CV ကို
တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာများအတွက်လည်းအဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာသငျသညျတခုပုံမှန်မဟုတ်သောအကြောင်းအရာ layout ကိုအတူအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်အလောင်းအစားသငျ့သညျ။ စာရွက်စာတမ်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓါတ်ပုံပါဝင်သည်သင့်တယ် ယခင်ကပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်းများကို.
အုပ်ထိန်း / ဆရာမ CV ကို
သငျသညျကလေးမြားအတှကျအတန်းပို့ချနေတဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဆရာဖြစ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ် သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်ထားကြသည် တစ်ဦး Pre-ကျောင်းမှာဆရာမအဖြစ်? သင်တစ်ဦးဖန်တီးမှုချဉ်းကပ်ပြဥပမာ, လက်မှုပညာ (ပန်းထိုးသို့မဟုတ်ပန်းကပ်အလှဆင်ခြင်း) ၏ပုံစံကိုတစ် CV ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ကွတ် CV ကို
တီထွင်ဖန်တီးမှုလည်းတစ်ခုအလွန်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် အချက်အပြုတ်အနုပညာမှသူတို့ကိုယ်သူတို့မွှုပျနှံသူမြားပညာရှင်များသည်။ သင့်ရဲ့လိမ္မာပါးနပ်ပြသနိုင်ဖို့, သင်သည်သင်၏မူရင်းစာရွက်အညီဖန်ဆင်းဟင်းလျာများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓါတ်ပုံအတူ CV ကိုနှင့်သင်၏အလုပ်ရှင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်း၏ ... တစ်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ပုံစံအတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးသားဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။
Confectioner CV ကို
ဒါမှမဟုတ်တကအလားအလာအလုပ်ရှင်ပေးပို့ခြင်းရကျိုးနပ်သည် သင်သည်ထိုရည်ရွယ်ချက်အဘို့အ icing သုံးပြီးသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု "ကိုရေး" နိုငျတဲ့ကြီးတွေကိတ်မုန့်? သငျသညျလညျးသငျ၏ CV ကိုဖုံးကွယ်ထားရသောတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာနှင့်အတူ cookies များကိုဖုတ်နိုင်ပါတယ်။
Make-up, အနုပညာရှင် / မိတ်ကပ်အနုပညာရှင် CV ကို
အဆိုပါလုပ်-up, အနုပညာရှင်ရဲ့ CV ကိုရောင်စုံများနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းတစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာဖို့အစုစုကိုမှ link တစ်ခုပူးတွဲတန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အရာအတွက်အလုပ်ရှင်, ဥပမာ, သင်လုပ်-Up နှင့်-Up လုပ်ပါစေသောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဆံပင်ညှပ်သမား CV ကို
သင်တစ်ဦးဆံပင်ညှပ်သမားရဲ့အနေအထားကိုလျှောက်ထားကြသောအခါမာလ်တီမီဒီယာပစ္စည်းများကိုလည်း CV ကိုတွဲထားနိုင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်စာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင်အလုပ်မှာသငျသညျ၏ဓာတ်ပုံကိုတင်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာယင်းဓာတ်ပုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာစနစ်တကျ lit, ပွငျဆငျကွ, etc
သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပိုင်ဖုံးကွယ်မထားဘူးကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ဦးကအဖိုးတန် CV ကိုလည်းရှင်းလင်းပြသားသောသည်နှင့်ပါရှိသည်, မသာအမှတ်ရစရာဖြစ်ပါသည် အတွေ့အကြုံ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်များနှင့် ပတ်သက်. အဓိကသော့ချက်သတင်းအချက်အလက်များ။ အဆိုပါ Pracuj.pl wizard ကိုသုံးပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးပါ။
သင်သည်အဘယ်သို့မျှအတွေ့အကြုံရှိသည်သည့်အခါသင်၏ CV ရေး
အဆိုပါများအတွက် CV ကိုရေးသားခြင်း ပထမဦးဆုံးအလုပ်အများဆုံးလူများအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးအရာကြွင်းလေ၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည် - ညာဘက်ထိုသို့ပြုမှ, သင်အချိန်ကိုရှာဖွေနှင့်သင်၏ဦးခေါင်းသည်ငြိမ်သက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
စတင်အဘို့ကောင်းသောသတင်း - ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောအရာအများစုကိုသင်၏ဦးခေါင်း၌ရှိကြ၏။ တစ် CV ကိုဖန်တီးသောအခါ, သင်သည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်၏ Nook နှင့် crannies သို့ရောက်ရန်ရှိသည်နှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစား, သင်၏အသက်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံများနှင့်သင့်အားသာချက်များနှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်။
ပညာရေးနှင့်အတူ Start - ပြီးဆုံးကျောင်းမှ
သည် "ပညာရေး" အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသို့မဟုတ်ပြီးစီးခဲ့လေ့လာမှုများ (ဘွဲ့, မာစတာ, ဘွဲ့လွန်လေ့လာမှုများ, etc) သို့မဟုတ်တစ်ပြီးစီးခဲ့အသက်မွေးမှုကျောင်းကထားပါ။ ကျနော်တို့ဒါ့အပြင်ကဒီမှာကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ယခင်ကျောင်းများမဝင်နိုင်ဘူး - အထက်တန်းကျောင်း, အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်မူလတန်းကျောင်း။ အဆိုပါချွင်းချက်အဘယ်သူ၏ပရိုဖိုင်းနဲ့အဆင့်ကိုရယူညွှန်ပြမြင့်ကျောင်းတွေ, ဖွစျလိမျ့မညျ အပိုဆောင်းကျွမ်းကျင်မှုဥပမာ, တစ်ဦးဟောပြောပွဲစပိန်ဘာသာစကားနဲ့အထက်တန်းကျောင်း။
တစ် CV ကိုအတွက် Professional ကအတွေ့အကြုံကို
သငျသညျပြီးသားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါက, သင်လေ့လာသင်ယူကြအတိအကျဘာကိုဖော်ပြရန်နှင့် အဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုနှင့်သင်၏ Intern များကို, Intern များကိုများနှင့်ထူးဆန်းအလုပ်အကိုင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့လေ့လာမှုများသို့မဟုတ်အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါကသို့သော်, သင်သည်သင်၏ CV ကိုအတွက်ထူးဆန်းသို့မဟုတ်ရာသီအလိုက်အလုပ်အကိုင်များမဝငျနိုငျသညျ။ အပေါ်အာရုံစိုက်သည် ယခင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုဖော်ပြ.
သင့်ရဲ့လေ့လာမှုတွေစဉ်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုရရှိခဲ့အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ က "နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှု" အပိုင်း၌သင်တို့၏အောင်မြင်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
အဆိုပါ CV ကိုအတွက်အားသာချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွား
အလုပ်ကြော်ငြာတွေမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ပျော့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်အများဆုံးမကြာခဏပေးအပ်ထားတယ်။ လူတစ်ဦး၏အဘယျသို့သော ပေးထားသောကုမ္ပဏီရှာဖွေနေသည်သငျသညျကိုလည်းတှငျဖျောပွထားသည့်၎င်း၏စည်းရုံးရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတွေးအခေါ်ကနေကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ် အလုပ်ရှင်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေး tab ကိုတိုက်ရိုက်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအများအပြားအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ၏ website တွင်။
အလုပ်ရှင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မူသောသင်တို့အားသာချက်များနှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်, သင်၏ CV ကို၏သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအတွက်ရိုက်ထည့်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားပြီးနောက်အချိန်အကောင်းတစ် CV ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုပြင်ဆင်မည်တံ့သောနောက်ဆုံးခြေလှမ်းများအတွက်ရောက်လေပြီ။ :) ဤအရာများကိုစုဆောင်းကွန်ပျူတာထိုင်ပြီး ... အဆင်သင့်!
CV ကိုများအတွက် Professional ကဓာတ်ပုံကို
A ကောင်းဆုံး CV ကိုဓာတ်ပုံကိုပခုံးကိုတက်ကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြသထားတယ်, ချောမွေ့တဲ့နောက်ခံပေါ်မှာနှင့်တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအပြုံးနှင့်အတူ။ သင်တစ်ဦးရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုများအတွက်ချောမွေ့, ကြားနေအင်္ကျီဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်ပုံသတိရပါ။ သငျသညျသေးဓာတ်ပုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, မစိုးရိမ်ပါ - သင်ဓာတ်ပုံရိုက်မရှိဘဲသင်၏ CV ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဲ့အစမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယင်းသို့ဓာတ်ပုံကိုယူပြီးတန်ဖိုးရှိမယ့် - ဒါဟာအနာဂတျအတှကျအသုံးဝငျဖွစျလိမျ့မညျ။ သငျသညျဓာတျပုံဆရာရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အလုပ်ဝိုင်းတစ်မကြာခဏဒြပ်စင်ဖြစ်သောတာဝန်ခံအခမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု session တစ်ခုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ပြီးစီးခဲ့သင်တန်းများ၏လက်မှတ်များ, အ CV ကိုအတွက်လက်မှတ်များ, ဆုနှင့်ဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့
တကယ်ဖွံ့ဖြိုးသောသူတွေကိုစုဆောင်း သင်နှင့်အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖွစျလိမျ့မညျ။ သင်သင်တန်း၏အဆုံး၏နေ့စွဲနှင့်စည်းရုံးရေးမှူးသတိရလျှင်, သင်မူရင်းကိုရှာဖွေရန်မလိုပါ။ သငျသညျမသေချာသေးလျှင်, ထိုစုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုသွားပါ။
သင်တန်း၏ရက်စွဲများနှင့်အကြောင်းအရာအလိုက်နယ်ပယ်ရေးထားလေ့ကျင့်ရေး။ အမှန်တကယ်ရှိသည်သောသူတို့အားအမှုအရာကိုမီးမောင်းထိုးပြ သငျသညျဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်သင့်ဝယ်ယူကျွမ်းကျင်မှုထောက်ပြတာပါ။
တစ် CV ကို၏ A ကောင်းဆုံးသာဓကသင်တန်း, စည်းရုံးရေးမှူး, နေ့စွဲနှင့်သင်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာယူကြပြီအကြောင်းအရာအလိုက်အကွာအဝေး၏နာမတော်ပါဝင်သည်။
ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံအရနှင့်သင်၏ CV ကိုကြွယ်ဝစေဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယ်အရာကိုအခမဲ့အချိန်ခုထဲကတစ်ခုဝါသနာကိုပထမဦးဆုံးအလုပ်လာပြီနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသနည်း အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်ကုမ္ပဏီနှင့်ပေါ့ပေါ့လှုပ်ရှားမှုများမှစုဆောင်းမှုများအကြားဆက်ဆံရေးကဘာလဲ ?.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပရဟိတအဖြစ်အပျက်, ကျောင်းသားပွဲတော်သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျညီလာခံစည်းရုံးရေး၏အရေးပါမှုကဘာလဲ? ဒါဟာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုထွက်လှည့် ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ! အလုပ်ရှင်များ, တက်ကြွသန္နိဋ္ဌာန်နှင့်စွမ်းအင်အပြည့်အဝနေသောတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။
အဘယ်အရာကိုဒြပ်စင်ဒူဘိုင်းအတွက်သင်၏ CV ကိုတက်မြိန်ကြမည်နည်း
သငျသညျပုံမှန်မဟုတ်သောကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားများရှိပါသလား? ဒါမှမဟုတ်သင်ကအနိုင်ရသွားပါတယ် စက်မှုလုပ်ငန်းယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုချီးမြှင့်? တစ် CV ကိုဖန်တီးသောအခါ, သင့်အလားအလာအလုပ်ရှင်အကြောင်းကြားပေးပါ။ သင့်ရဲ့ image ကိုစုဆောင်းမှုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ပိုငျသညျကိုသိရန်နှင့်သိ သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို သာ.။ ဒါဟာသင်ရှိသည်အားသာချက်များကိုတင်ပြဖို့ဘယ်လိုသိသောအရေးပါသည်။ သင်၏ CV ကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေလျက်, ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များပါဝင်သည်ဖို့ဥပမာ, သောယူအေအီးအတွက်အရေးပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ, ရရှိခဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆု, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ပါဝင်မှု, အကောင်းဆုံးကိုအထူးကုနဲ့တွဲပြီးအလုပ် - ထိုသို့သောအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြ, သင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်။ ဒါဟာသင်ပေးသတင်းအချက်အလက်များအလုပ်ရှင်၏လိုအပ်ချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်အရေးကြီးပါသည်။
ဂျပန်, တရုတ်, ကိုရီးယား, ခကျြ, ရုရှ, ဒတျချြ - ဤသူ၏အသိပညာအများကြီးလျော့နည်းဘုံ, ဥပမာ, အင်္ဂလိပ်သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ထက်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများဥပမာဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးနယ်ပယ်ဘာသာစကား၏အသိပညာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး အလုပ်ဈေးကွက်ပေါ်တွင်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်။
သငျသညျအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်အတွက်သငျသညျကလေးမြားအတှကျအားကစားလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးသို့မဟုတ်သင်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အကျိုးအတွက်ပြုမူသလဲ? ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုယူပြီးသင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုရနိုင်ဖြစ်ကြောင်းထေူ၏။
ဒါဟာဖော်ပြထားခြင်းဖို့လည်းကောင်းလှ၏ သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးကူညီအကျိုးစီးပွား။ စစ်တုရင်ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်သင်ပေးတယ်။ ခရီးသွားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကိုသင်ယူဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ချမှတ်ခြင်းစတာတွေ, သည်းခံခြင်းမှသက်သေခံ
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးတံ့သောဖောင့်ရှိအောင်နှင့် legibly တင်ပြစေခြင်းအရေးကြီးပါသည်။ ဤကျေးဇူးတင်ပါသည်, အ CV ကိုပိုပြီးဖော်ပြဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Courier, ရုပ်ပြ Sans သို့မဟုတ် Vivaldi တူသောဖောအရှုံးမပေးဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သငျသညျဥပမာ, Calibri သို့မဟုတ် Arial အဘို့, အပေါ်အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
document တစ်ခုဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုနေရာယူခြင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအောင်မြင်မှုများပေါင်းသင်းစုဆောင်းရေးများအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံလည်းစာရွက်စာတမ်းပိုကြည့်ကောင်းသွားစေနိုင်သည်။ ငါ့ကို #task: တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလည်းဥပမာသင်က hashtag နှင့်အတူတစ်ဦးသည် T-ရှပ်အင်္ကျီမှာသူ့ကိုပြပါလိမ့်မည်, လျှင်သင်မှတ်ရစေနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အရည်အချင်းများ, အဖြစ်ပုံနဲ့အစီအစဉ်များ၏ပုံစံအတွက်တင်ပြအကြောင်းအရာကပိုမိုလွယ်ကူသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါစေ, ဆွဲပုံများစာရွက်စာတမ်းကြည့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် - CV ကို, infographics, အချိန်ဇယားများအတွက် icons ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီအကြောင်းအရာ, ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ, အရေးအပါဆုံးမကိုအောက်မေ့ထိုက်သည်။
သင်၏ CV အတွက်အရောင်များ
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်ရွေးချယ်သောအရာကိုအရောင်များ, လူကြီးမင်း၏ CV ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းဖြစ်သင့်။ သင်ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ထားလျှင်ဥပမာ, သငျသညျပေးထားသောရာသီအတွက်အပူဆုံးအရောင်များစာရင်းထားတဲ့အတွက် Pantone အစီရင်ခံစာများကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်ဖော်ပြထားသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်အတည်ပြု CV ကိုမှလက်မှတ်များပူးတွဲ။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် တစ်အစုစုသို့မဟုတ်သင့်အလုပ်၏နမူနာအတူ website တစ်ခုမှ link တစ်ခုထားပါ။
သင်၏ CV ထဲမှာနောက်ထပ်ဖန်တီးမှု element တွေကိုအားမရတဲ့အခါ, သတိပြုရကြမည်။ အဆိုပါအတ္ထုပ္ပတ္တိ ထူးကဲဖြစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ရပ်နိုင် အခြား application ကနေ။ အဲဒါကိုရှင်းလင်းပြသားသောသည်နှင့်ရှင်းလင်းစွာသင်တစ်ဦးအခန်းအလွတ်ဘို့, လက်ျာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြောင်း, သို့သော်အရေးကြီးသည်။
စော်ဘွားများ၏အမျိုးအစားအတွက်ခေတ်မီ CV ကိုရေးသားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖျော်ဖြေသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ပတ်သက်. ဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူရှင်းလင်းပြသားသောဗေဒ, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခြားအရည်အသွေးအဆင့်။ ထိုသို့သော CV ကိုသစ်ကိုတစ်နှစ်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရပါမည်။
စာရွက်စာတမ်းတစ်ဦးဖန်တီးမှုရှိသည်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒါဟာအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များအဓိကအားတုံ့ပြန်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆိုပါ CV ကိုရှည်လျားလွန်းမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ငါစုဆောင်းမှုအစည်းအဝေးတွင်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ အရေးအပါဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကိုမြင်လျှင်ပထမတစ်ချက်မှာမီးမောင်းထိုးပြ - ငါကျိန်းသေထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ CVs များမှာသောအခါငါအရမ်းတန်ဖိုးထား ငါကြော်ငြာအတွက်နေရာချအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုမှလိုက်ဖက်။
သငျသညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတအာရုံစိုက်ပါသလား သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်သလား? သင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပါသလား? သင်တို့သည်နောက်အခက်အခဲအသစ်သောအခြေအနေများကပြွီးရှိပါသလား တိကျသောစကားများသုံးပြီးသင်၏ CV အတွက်ကအကြောင်းရေးပါ.
အဆိုပါ CV ကိုအဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောသနည်း?
သင်၏ CV ကိုသင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုသင်အကြောင်းကြားပုံမှန်မဟုတ်သောအတွေးအခေါ်များရှိသည်နှင့်သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီအစဉ်များကိုလိုက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျဖြစ်သည် တစ်ဦးကောင်းလက်မှတ်နှင့်အတူသငျသညျများကိုသင်၏ CV အဘို့, : ကဲ့သို့သော key ကိုရှုထောင့်အကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ
သင့်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိအတွက် posted သတင်းအချက်အလက်အသစ်ပြောင်းခြင်းဖက်ရှင်ထဲကတတ်ခဲ့ပါဘူး။ အသစ်တစ်ခုကိုတစ်နှစ်စတင်သောအခါ, သင်၏ CV ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်လောလောလတ်လတ်ဝယ်ယူကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းများထည့်ပါ။ သငျသညျအနာဂတျတှငျအလုပ်အကိုင်အသင်တို့၏အရပျကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရည်ရွယ်ကြပါဘူးလျှင်သင်ပင်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုများအနှစ်ချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။
ဒါဟာအခါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏အမည်, ဥပမာတခုသံမဏိထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများတစ်ဦးဖြန့်ဖြူးအလုပ်ရှင်အထူးပြုထားတဲ့အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း, ရေးကောင်းလှ၏။
ငါသည်လည်းထိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းလုပ်ဆောင်ကြောင်းတာဝန်များကိုသို့မဟုတ်အကြောင်း CV ကိုဖတ်ချင်ပါတယ် ယခင်အလုပ်ရှင်နှင့်အတူဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်သောငါ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကိုက်ညီတဲ့။ အခုသူနေတဲ့ service ကိုနည်းပညာရှင်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးက 15 နှစ်ပေါင်းအစောပိုင်းကတစ်စားပွဲထိုးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကွောငျးရေးသားဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။
Image ကိုကွက်တိဝင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်။ သင်တစ်ဦးအလားအလာအလုပ်ရှင်အပေါ်အပြုသဘောစှဲစေချင်ပါသလား သတိရှိရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေးချယ်မှုအတွက်တသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်တိကျတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုး။ ဒါ့အပြင် စုဆောင်းမှုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ၏အခြားသောသတင်းရင်းမြစ်များ၏ကွက်တိဝင်သေချာ။ အဆိုပါအယူအဆ၏ CV ကို, အဖုံးစာအစုစုနှင့်သင့်သဘောထားကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
"မနက်ဖြန်၏အရည်အချင်း" ကိုညွှန်းအကြောင်းအရာ။ သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တက်ကြွသောသဘောထားကသရုပ်ပြနှင့်အသစ်မီဒီယာသုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါသလား? အဆိုပါ CV ကိုထဲမှာဖော်ပြထားခြင်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်, ဆောင်ရွက်သင်၏ယခင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုများဖော်ပြ။
CV ကိုဂရပ်ဖစ် layout ကိုအများဆုံးဖော်ပြဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ image ကိုနှင့်ကိုက်ညီသည်ဆိုလျှင်သင်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်နေရာဒါမှမဟုတ်အချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. အတှေ့အကွုံကိုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကုသဆွဲဆောင်မှုအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုမသာရှိသည်အရေးကြီးသောကြောင့် ဒါပေမယ့်လည်းဘဝပုံပြင်များ၏ဖတ်နိုင်တဲ့ပေါ်မှာ။ - တစ် CV ကိုဖတ်နေတဲ့အခါ, အဲဒါကိုတွင်ပါရှိသောအရေးကြီးဆုံးသတင်းအချက်အလက်များရဲရင့်ကိုသုံးပါနှင့်လည်းထင်ရှားစေနိုင်ရန်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြသင့်ကြောင်းအကြှနျုပျအဘို့အရေးကြီးပါသည်။
ယူအေအီးအတွက်သင်၏ CV ၏စစ်မှန်မှုကို
လူကြီးမင်း၏ CV ကို လိုက်. ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှင်၏မျှော်လင့်ချက်များ?
ထူးခြားတဲ့အလွန်ဖန်တီးမှုစာရွက်စာတမ်း Creating သငျသညျအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုဆောင် ခဲ့. , ဒါပေမယ့်သာအချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတာသတိရပါ အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့်အလားအလာအလုပ်ရှင်၏လိုအပ်ချက်ရန်၎င်း၏ဆက်စပ်မှု ပုံစံထက်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်။ ဒါဟာ CV ကိုပုအလုပ်အကိုင်ကိုက်ညီကြောင်းလည်းအရေးကြီးပါသည်။ သင်စာရင်းကိုင်ဌာနသို့တစ်ဦးအနေအထားလျှောက်ထားနေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များနှင့်အနုပညာဓါတ်ပုံတွေကိုရှောင်ရှားရန် သာ. ကောင်း၏။
ထိုသို့သောဒြပ်စင်သဘာဝကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပေမယ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်ထွက်ရပ်ကောင်းပါတယ်။ အားလုံးအထက်တွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုလိုအပ်ဝန်ခံကိစ္စတွင်တစျအနည်းငယ်အရောင်များနှင့်အတူကစားခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများ၏အဆင်အပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ငြိမ်သက်ဂန္ထံမှသွေဖည်ခြင်းနှင့်စကားရပ်၏အားကောင်းနည်းလမ်းများပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ရှာနေသည့်အခါဒါကြောင့်ခေတ်သစ် tools တွေကိုလမ်းဖွင့်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်၎င်းတို့ကို၏အသုံးချနေကျိုးနပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ချက်ချင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုတုံ့ပြန်သင့်လျှောက်လွှာ၏ status ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုပေးသော Pracuj.pl မိုဘိုင်း application ကို၏အလားအလာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။